Niezaka hatrany anefa i Nantenaina, ka dia afaka Bac série A2 tamin'ny taona 2003.
Nanao filière Economie teny Ankatso tao amin'ny Faculté DEGS izy ny taona 2004.
Nahazo maitrise en Économie izy tamin'ny taona 2007, Option Economie de développement.
Marihina fa tena jamba tanteraka izy ary tsy mahita na kely aza.
Ireo namany no manampy azy tao ampianarana momba ny resaka sary tahaka ny hoe graphique na tableau statistique tamin'izany.
Izy moa dia manana ordinateur tsotra ihany fa mampiasa logiciel lecteur d'écran izy : "screen reader" ary matériel connecté amin'ny ordinateur : Braille display.
Rehefa vita ny fianarany dia niasa tao aminy Ministère de la population izy nanomboka ny taona 2011 hatramin'izao, Assistant Technique au sein de la Direction de la promotion du genre Minpop izy teo aloha, ary amin'izao dia Assistant Technique au sein de la Direction de la sécurisation sociale Ministère de la population.
Tamin'ny zoma 15 septambra 2017 teo izy no nanao ny soutenance en Master tao amin'ny Département multidisciplinaire en Gestion des Risques et des catastrophes au sein de la faculté DEGS (Département économie).
Ny note azony tamin'izany soutenance izany dia 16,5/20 Mention Très bien.
Teraka tamin'ny 25 juin 1983 (34 taona) i Nantenaina ary manambady, manana fahasembanana ihany koa ny vadiny. Niteraka vavy kely roa izy mivady ary salama tsara avokoa ireo ankizy tsy misy fahasembanana.
Mitondra fisaorana ho an'ireo namany sy mpiara-mianatra aminy ary ireo mpampianatra sy mpiara-miasa aminy i Nantenaina. Tsy adinony manokana amin'izany ireo Ray amandreniny nanabe azy, ny vady aman-janany izay manohana azy na andro na alina.
Mahatsiaro tena mitovy amin'ny rehetra i Nantenaina na dia samy manana ny mahasamihafa azy hoy hatrany izy. Tsy fiantrana no ilaina hoy izy fa fametrahana ny toerana tokony hisy ny tsirairay, ka izany no anisany nanentana azy hanao izao soutenance izao, ametrahana ny toeran'ireo izay mana-kilema raha sendra loza.
samedi, 30 septembre 2017 03:40